Nahoana ny Vavolombelon’i Jehovah no Tsy Mandeha Miady? | Fanontaniana
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Armenianina (Andrefana) Asamey Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bashkir Basque Bassa (Cameroun) Batak (Toba) Bengali Bichlamar Boligara Bosniaka Boulou Catalan Cebuano Chavacano Chichewa Chin (Hakha) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chol Cinghalais Dangme Danoà Digor Efik Espaniola Estonianina Failandey Fante Fidjianina Fitenim-paritra Alemà Fon Frantsay Féroïen Ga Galicienne Galoà Garifuna Goujrati Goun Grika Groenlandey Guarani Géorgien Haoussa Hebreo Hiligaynon Hindi Holandey Hongroà Iban Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Isoko Italianina Japoney Javaney Kabiyè Kabyle Kachin Kambôdzianina Kannada Kantôney Nentim-paharazana Karen (S'gaw) Kazakh Kazakh (Arabo) Kekchi Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Kissi Kongo Koreanina Kreôla any Haïti Krio Kroaty Kwangali Kwanyama Lamba Letonianina Lingala Litoanianina Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mam Mambwe-Lungu Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Mapudungun Marathe Masedonianina Mazateky (Huautla) Mende Mingrelian Mixe (Afovoany) Mongol Mooré Myama Nahuatl (Afovoany) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Puebla Avaratra) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Ngangela Nias Norvezianina Nzema Népali Oromo Ossète Ourdou Ouzbek Ouzbek (Romanina) Ouïgour (Sirilika) Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Pidgin any Amin'ny Nosy Salomon Poloney Portogey (Brezila) Portogey (Portogaly) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Chimborazo) Rarotonga Romanianina Rosianina Samoanina Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sidama Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Soli Somali Soundanais Swahili Swati Sãotomense Tagalog Tahisianina Tailandey Tajiki Tamoul Tankarana Tarasque Tatar Tchouvache Tenin’ny Tanana Amerikanina Tenin’ny Tanana Irlandey Tenin’ny Tanana Japoney Tenin’ny Tanana Rosianina Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tlapanèque Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tseky Tsonga Turkmène Twi Tzotzil Télougou Valencienne Venda Vezo Vietnamianina Wallis Xhosa Yorobà Zapoteky (Andilan-tany) Zapoteky (Lachiguiri) Zoloa tzeltal Éwé
Nahoana ny Vavolombelon’i Jehovah no Tsy Mandeha Miady?
Tsy mandeha miady ny Vavolombelon’i Jehovah, noho ireto antony ireto:
Mankatò an’Andriamanitra. Milaza ny Baiboly fa “hanefy ny sabany ho angadinomby” ny mpanompon’Andriamanitra, sady “tsy hianatra ady intsony.”—Isaia 2:4.
Mankatò an’i Jesosy. Hoy i Jesosy tamin’ny apostoly Petera: “Avereno amin’ny tranony ny sabatrao, fa ho fatin’ny sabatra izay rehetra mampiasa sabatra.” (Matio 26:52) Nasehon’i Jesosy àry fa tsy tokony handray fitaovam-piadiana ny mpanara-dia azy.
Nandidy ny mpianany koa i Jesosy hoe tsy tokony ho “anisan’izao tontolo izao” izy ireo. Ankatoavin’izy ireo izany ka tsy midikiditra amin’ny politika izy ireo. (Jaona 17:16) Tsy toherin’izy ireo koa ny zavatra ataon’ny miaramila, ary tsy sakanan’izy ireo izay te hanao miaramila.
Tia ny mpiara-belona. Nandidy ny mpianany mba ‘hifankatia’ i Jesosy. (Jaona 13:34, 35) Lasa toy ny fianakaviana iray maneran-tany àry izy ireo, ka tsy mandeha miady mba hamonoana ny rahalahiny sy ny anabaviny.—1 Jaona 3:10-12.
Manahaka an’ireo Kristianina voalohany. Hoy Ny Rakipahalalana Momba ny Fivavahana sy ny Ady (anglisy): ‘Tsy nety nandeha niady sy nanao miaramila ny mpianatr’i Jesosy voalohany, satria nampianariny hifankatia sy ho tia ny fahavalony.’ Nilaza ilay teolojianina alemà atao hoe Peter Meinhold fa tamin’ny mpianatr’i Jesosy voalohany, dia “tsy nety mihitsy ny hoe sady Kristianina no miaramila.”
Manasoa ny fiaraha-monina
Tena mahasoa ny fiaraha-monina ao amin’ny tany misy azy ny Vavolombelon’i Jehovah, sady tsy mampidi-doza. Manaja ny manam-pahefana izahay, satria mankatò an’ireto toro lalan’ny Baiboly ireto:
‘Ekeo ny manam-pahefana.’—Romanina 13:1.
“Aloavy amin’i Kaisara àry izay an’i Kaisara, fa amin’Andriamanitra kosa izay an’Andriamanitra.”—Matio 22:21.
Mankatò lalàna àry izahay, mandoa hetra, ary manaiky ny ezaka ataon’ny manam-pahefana mba hanasoavana ny vahoaka.
Nasain’Andriamanitra niady ny vahoakany fahiny. Nampianatra ny mpianany anefa i Jesosy hoe tokony ho tia ny fahavalony izy ireo. Fa inona no niova?
Nandeha niady tamin’ny anaran’i Jehovah Andriamaniny ny Israelita fahiny. Mankasitraka ny ady hitantsika amin’izao àry ve Andriamanitra?
Mety ve Raha Miady ny Kristianina?
Hizara Hizara Nahoana ny Vavolombelon’i Jehovah no Tsy Mandeha Miady?
Nahoana ny Vavolombelon’i Jehovah no Tsy Manao Politika?
Ny Fivavahana sy ny Resaka Ady
Ahoana no Hampisy Fiadanana etỳ An-tany?